Ndozo | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mkpụrụ ndụ Gut Brain n'ime ndị na-eme ka akụ na ụba rụọ ọrụ
Ebenezer Yeboah Nwere ike 30, 2020
Mgbe a hụrụ mkpụrụ ndụ glial mkpụrụ ndụ na-enwe ihe nzuzo site na etuto ahụ, mkpụrụ ndụ glial na-agbanwe bụrụ ndị na-akwalite uto tumo. Ọrụ ahụ na-egosi mkpa mkpụrụ ndụ glial dị na microenadium tumor nwere ike ibute ebumnuche ndị ọhụrụ maka ọgwụgwọ nke ọrịa kansa eriri afọ.
Akpụ ụbụrụ na-etolite akwara ozi
Ebenezer Yeboah Nwere ike 27, 2020
Igwu ahụ, a na-akpọ gliomas dị elu, na-etolite ọgbụgba ọkụ na-egbochi ihe ndị eletriki elele sitere na mkpụrụ ndụ akwara nwere ahụike iji na-eto uto nke ha. Nnwale mere gosiri na ịkwụsịtụ ọrịa ndị a na ọgwụ ọgwụ a na-alụ ugbu a belatara uto nke ọrịa ndị dị na ụmụ oke, na-enye ihe akaebe izizi maka ụzọ ọhụụ iji gwọ ọrịa gliomas.
Immunotherapy ozugbo Iji Brain Tumors
Ebenezer Yeboah Nwere ike 25, 2020
Immunotherapy ka etuto ụbụrụ. Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-eme ka anyị mata etu e nwere ike isi nyefee ọgwụ mgbochi ọrịa otu ụbọchị na ụbụrụ iji gwọọ akpụ akpụ ụbụrụ. […]
Ihe ndị na-egbu egbu na-eduga n'ọgbọ ndụ ogologo oge na kansa ụbụrụ
Nchikota ọgwụ chemotherapy n'oge eji aru aru aru nke oria jiri oria gha eme ka ndu ghara idi ndu, ndi nyocha emeputala. * Isi mmalite
Ọgwụ Na-ahụ Maka Ahụhụ Wepụrụ ‘BiTE’ Ọrịa Cancer
Bright Amponsah Nwere ike 20, 2020
Ndị ọrụ nyocha achọpụtala usoro ọhụụ nke nwere ike ime ka ọgwụ mgbochi ọrịa ghara ịba uru ọzọ, nweekwa ụbụrụ ụbụrụ ma gbasaa ojiji ya megide ụdị etuto ndị ọzọ siri ike. N’ịkwado na nyocha ha gosipụtara na ụdị ọhụụ na-akpali akpali nke immunotherapy maka ọrịa kansa nwere ọrụ n’ime ndị ọrịa nwere ọrịa glioblastoma, ụdị ọrịa kansa na-egbukarị na ndị ọrịa ụbụrụ, ndị ọrụ nyocha Massachusetts General Hospital (MGH) emepụtawo usoro ọhụụ nke nwere ike ime ka ọgwụ mgbochi karịa. dị irè ọzọ ụbụrụ ụbụrụ na-agbasa ya iji megide ụdị ndị ọzọ etuto ahụ siri ike. A na-ebipụta ọmụmụ ha n'akwụkwọ akụkọ Nature Biotechnology.
Ndị ọrụ nyocha na-emeghe usoro nri mkpụrụ ndụ nke ọrịa cancer, bụ isi ihe na-akpata uto
Clifford Nwere ike 20, 2020
Otu mba dị iche iche nke ndị ọrụ nyocha na-eme nchọpụta achọpụtala usoro ọrụ ike nke mkpụrụ ndụ kansa na-ebute uto nke nucleolus ma na-eme ka etuto ahụ mụbaa ngwa ngwa. Nchoputa […]
Sụgharị ụkwara ụbụrụ ma mepee ụzọ maka ọgwụgwọ ịgwọ ọrịa cancer ezubere iche
Enwere ike iji ọgwụ ọhụrụ, a na-akpọ IP1867B mee ihe maka ọgwụgwọ n'ọdịnihu nke etuto ụbụrụ. Ndị otu nyocha ahụ gosipụtara na IP1867B na-arụ ọrụ na ọgwụgwọ ọrịa cancer dị ugbu a na-eme ka arụmọrụ ha dị elu na, […]
Dinggbakwunye ọgwụ MS na ọgwụ cancer ezubere iche nwere ike melite nsonaazụ glioblastoma
Otutu ogwu sclerosis, jikoro ya na oria cancer a na-acho acho, a na-agbadata glioblastomas onye oria etolite na ụmụ oke, site na iru sel na-akpata, dị ka ọmụmụ ọhụrụ. […]
Igwe ọkụ eletrik na-adịghị emerụ ahụ na-eme ka ọbara na-erugharị n’arụ ụbụrụ
Ndị ọkà mmụta sayensị gosipụtara na itinye ụbụrụ ọkụ dị ala n'akụkụ ụbụrụ ndị ọrịa nwere akpụ ahụ kpatara mbelata ọbara n'ọbara n'etiti ezumike ahụ ma na-ahapụ ụbụrụ ndị ọzọ agbanweghị. Ọ bụ ezie na […]
Glioblastoma: Ebumnuche Ọgwụ Ọhụrụ Maka Glioblastoma
Ebumnuche ọgwụ maka glioblastoma Glioblastoma. Ihe omumu ohuru nke mba ohuru achoputara uzo ogwu ohuru maka ịgwọ glioblastoma. Ebumnuche a bụ akụkụ nke ụzọ ekwentị adịbeghị tupu a kọwaa […]